Akụkọ Archieven - Law & More B.V.
Ozi banyere iwu dị mkpa, iwu dị ugbu a na ihe omume | Law and More
Nchedo ndị ahịa na usoro na ọnọdụ niile
Ndị ọchụnta ego na-ere ngwaahịa ma ọ bụ na-enye ọrụ na-ejikarị usoro na ọnọdụ zuru oke edozi mmekọrịta nke onye nnata nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ. Mgbe onye nnata bụ onye na-azụ ahịa, ọ na-enwe nchedo ndị ahịa. Emepụtara ndị ahịa iji kpuchido ndị ahịa ‘adịghị ike’ megide ndị ọchụnta ego ‘ike’. Ka ewere […]
Ọtụtụ mmadụ na-abịanye aka na nkwekọrịta n’aghọtaghị ihe ndị dị n’ime ya
Binye aka na nkwekọrịta n’aghotaghi ihe di n’ime ya. N'ọtụtụ oge, nke a na-emetụta mgbazinye ma ọ bụ zụta nkwekọrịta, nkwekọrịta ọrụ yana nkwekọrịta nkwekọrịta. Ihe kpatara na aghọtaghị nkwekọrịta nwere ike ịchọta mgbe ụfọdụ n'iji asụsụ eme ihe; […]
Iwu Uru Ọrịa Dutch Shipness mgbe nkwarụ ọrụ dị ka nke mkpesa nke uche mgbe ọ dịsịrị ime?
Iwu Uru Ọrịa Dabere na edemede 29a nke Ọrịa Na-arịa Ọrịa nwanyị inshọransị na-enweghị ike ịrụ ọrụ nwere ikike ịnata ụgwọ ma ọ bụrụ na ihe kpatara nkwarụ na-arụ ọrụ metụtara afọ ime ma ọ bụ ịmụ nwa. N'oge gara aga, njikọ dị n'etiti psychological […]
Na Netherlands mmadụ natara akwụkwọ ikike ngafe na-enweghị aha nwoke
Na Netherlands oge mbụ mmadụ natara akwụkwọ ikike ngafe na-enweghị njirimara nwoke na nwanyị. Nwanyị Zeegers adịghị ka nwoke ma ọ dịka nwanyị. Na mbido afọ a, ụlọ ikpe Limburg kpebiri na okike abụghị ihe gbasara njiri mmekọahụ mana nke […]
Gọọmentị chọrọ ikewapụta ezumike nka na mgbe ọ bụla gbasara alụkwaghịm
Gọọmentị Dutch chọrọ ịhazi ndị mmekọ na-agba alụkwaghịm na-akpaghị aka ịnata ọkara ego ezumike nka ibe ha. Onye ozi Dutch Wouter Koolmees nke Social Affairs na Employment chọrọ ka ha tụlee atụmatụ na Chamberlọ nke abụọ na etiti 2019. Na oge na-abịanụ ka […]
A na - echekwa onye njem njem ịkwụ ụgwọ odida n'aka ndị na - eweta njem
Nye ọtụtụ ndị mmadụ, ọ ga-abụrụ nro: ezumike a nke ị rụsiri ọrụ ike maka afọ niile kagburu n'ihi enweghị ego nke ndị na-eweta njem. N'ụzọ dị mma, ohere nke ihe a na-eme gị ebelatala site na mmejuputa iwu ọhụrụ. Na July 1, 2018, ọhụrụ [
Ọdịiche dị n’etiti onye njikwa na onye nhazi
Iwu General Data Protection (GDPR) adịlarị ike ruo ọtụtụ ọnwa. Otú ọ dị, a ka nwere mgbagwoju anya banyere ihe okwu ụfọdụ pụtara na GDPR. Ọmụmaatụ, ọ bụghị ihe doro anya na onye ọ bụla ihe dị iche bụ n'etiti a njikwa na processor, ebe ndị a bụ isi […]
Omume azụmahịa na-ezighi ezi site na mgbakwunye ekwentị
A na-akọkarị ndị isi Dutch Dutch maka Ndị Ahịa na Ahịa Azụmahịa azụmaahịa na-ezighi ezi site na ekwentị. Nke a bụ nkwubi okwu nke Dutch Authority for Consumers and Markets, onye nlekọta onwe ya nke na-eguzo maka ndị na-azụ ahịa na azụmahịa. Ndị mmadụ na-bịakwutere ọzọ na ndị ọzọ site na ekwentị na-akpọ na-enye maka [
Ndezigharị nke Iwu Nlekọta Ndị Ọrụ Dutch Trust Office
Iwu Nlekọta Ọfịs Dutch Dutch Dabere na Iwu Nlekọta Nlekọta Dutch Trust, a na-ahụta ọrụ ndị a dị ka ọrụ ntụkwasị obi: ịnye ụlọ maka ụlọ ọrụ iwu ma ọ bụ ụlọ ọrụ yana mgbakwunye na ịnye ọrụ ndị ọzọ. Ndị ọzọ ọrụ nwere ike, ihe ndị ọzọ, iso nke inye […]
Nwebisiinka: kedu mgbe ọdịnaya dị ọha?
Ikike nke ọgụgụ isi iwu na-emepe emepe mgbe nile ma na-eto eto nke ukwuu n'oge na-adịbeghị anya. Enwere ike ịhụ, n'etiti ndị ọzọ, na iwu nwebisiinka. N'oge a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile nọ na Facebook, Twitter ma ọ bụ Instagram ma ọ bụ nwee ebe nrụọrụ weebụ nke ya. Ya mere, ndi mmadu meputara otutu ihe karie ka ha na emebu, nke a na ebiputa n'ihu ọha. […]
Nnapụta abụghị onye ọrụ
'Deliveroo onye na-ebu ịnyịnya ígwè Sytse Ferwanda (20) bụ onye ọchụnta ego nwere onwe ya, ọ bụghị onye ọrụ' bụ ikpe nke ụlọ ikpe dị na Amsterdam. Nkwekọrịta a kwubiri n'etiti onye mgbapụta na Deliveroo anaghị agụta dị ka nkwekọrịta ọrụ - yabụ onye mgbapụta abụghị onye ọrụ na […]
Poland kwụsịtụrụ ịbụ onye so na European Network of Council Council for the Justice (ENCJ).
Njikọ nke European Council of Council for Council of Justice (European Network of Councils for Judicial) (ENCJ) akwụsịla Poland ka ọ bụrụ onye otu. ENCJ kwuru inwe obi abụọ banyere nnwere onwe nke ikike ikpe ikpe Polish dabere na mgbanwe ndị a mere n'oge na-adịbeghị anya. The Polish na-achị otu Iwu na ikpe ziri ezi (PiS) nwere […]
Biputere nyocha Google na-ezighi ezi na ụgha
Debanye nyocha Google na-adịghị mma na ụgha na-efu ezigbo onye ahịa enweghị afọ ojuju. Onye ahịa ahụ kwuru nyocha na-adịghị mma gbasara ụlọ akwụkwọ ọta akara na ndị isi oche ya n'okpuru aha dị iche iche na aha. Amsterdamlọikpe Mkpegharị Ikpe nke Amsterdam kwuru na onye ahịa ahụ emegideghị na ọ naghị eme ihe kwekọrọ na [the]
Are na-eme atụmatụ ịre ụlọ ọrụ gị?
Courtlọikpe Mkpegharị Ikpe nke Amsterdam Mgbe ahụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịrịọ ndụmọdụ kwesịrị ekwesị banyere ọrụ metụtara ọgbakọ ndị ọrụ ụlọ ọrụ gị. Site n'ime nke a, ị nwere ike izere nsogbu nwere ike ịre n'ahịa ahụ. Na a na-adịbeghị anya na-achị nke Amsterdam oflọikpe Mkpegharị, na Enterprise Division […]
Imezigharị usoro iwu nke Dutch: telefon na-enwe mmetụta nzuzo dị mma echebe n'ọdịnihu
Na July 12, 2017, ndị omebe iwu Dutch ji otu olu kwenye na Mịnịsta nke ime ime obodo na mmekọrịta mmekọrịta Alaeze, ka ọ dị nso, chebe nzuzo nke email na nkwukọrịta nzuzo nzuzo ndị ọzọ. Nkeji edemede 13 paragraf 2 nke Dutch Constitution kwuru na nzuzo nke oku ekwentị […]
Iwu ọhụụ maka mgbasa ozi maka sịga eletriki n’enweghị nicotine
N’ọnwa Julaị 1, 2017, amachibidoro na Netherlands ịkpọsa anwụrụ elektrọn na-enweghị nikotin na maka ahịhịa na ahịhịa maka mmiri pọmpụ. Iwu ọhụrụ ahụ metụtara mmadụ niile. N'ụzọ dị otú a, Gọọmentị Dutch na-aga n'ihu na iwu ya iji kpuchido ụmụaka n'okpuru 18. Ka ọ dị na July 1, 2017, […]
Ọdụ ụgbọ mmiri Rotterdam na TNT nke mwakpo ụwa
Na June 27, 2017, ụlọ ọrụ mba ụwa nwere nsogbu IT n'ihi mwakpo ransomware. Na Netherlands, APM (nnukwu ụlọ ọrụ na-ebufe akpa Rotterdam), TNT na ndị na-emepụta ọgwụ MSD kọrọ ọdịda nke sistemụ IT ha n'ihi nje a na-akpọ "Petya". Kọmputa nje malitere Ukraine ebe ọ metụtara […]
Google kwụrụ ụgwọ EU nke ijeri EU 2,42. Nke a bụ naanị mmalite, enwere ike itinye ntaramahụhụ abụọ ọzọ
Site na mkpebi nke European Commission, Google ga-akwụ ntaramahụhụ nke EUR 2,42 maka imebi iwu mkpuchi azụmahịa. Kọmịshọn European kwuru na Google bara uru na ngwa ahịa nke Googlezụ ahịa nke Google na nsonaazụ nchọta Google iji mebie ngwaahịa ndị ọzọ. Njikọ […]
European Commission chọrọ ndị na-emechitere ndị mmadụ ozi iji kọọrọ ha banyere iwu…
European Commission chọrọ ka ndị na-emechitere ndị mmadụ ozi gwa ha maka iwu maka izere ụtụ isi ha mepụtara maka ndị ahịa ha. Mba na-efukarị ego ụtụ isi na-abụkarị n'ihi mmefu ego obodo nke ndị ndụmọdụ ụtụ isi, ndị na-edekọ ego, ụlọ akụ na ndị ọka iwu (ndị na-emechitere ya ọnụ) mepụtara maka ndị ahịa ha. Ka iwelie nghọta na-eme ka cashing ndị ụtụ isi site na […]
Onye ọ bụla kwesịrị idowe Netherlands nke ọma na ọsịsọ, Cybersecuritybeeld Nederland 2017 kwuru
Onye ọ bụla kwesịrị ka Netherlands dị nchebe na-ekwu Cybersecuritybeeld Nederland 2017. O siri ike iche n'echiche ndụ anyị na-enweghị Intaneti. Ọ na-eme ka ndụ anyị dị mfe, mana n'aka nke ọzọ, na-ebute ọtụtụ ihe egwu. Teknụzụ ndị ahụ na-eto ngwa ngwa na ọnụọgụ cybercrim na-arị elu. Cybersecuritybeeld Dijkhoff (Onye isi […]
Netherlands bụ onye ndu ihe omimi na Europe
Dabere na European Innovation Scoreboard nke European Commission, Netherlands natara ihe ngosi 27 maka ikike ọhụụ. Netherlands dị ugbu a na 4th (2016 - 5th place), a na - akpọkwa ya Onye Ndú Innovation na 2017, tinyere Denmark, Finland na United Kingdom. Dị ka Dutch Minister […]
Estụ ụtụ: n'oge gara aga na ugbu a
Akụkọ banyere ụtụ malitere n'oge ndị Rom. Ndị bi n’ókèala Alaeze Ukwu Rom na-atụ ụtụ isi. Taxkpụrụ ụtụ isi mbụ na Netherlands pụtara na 1805. A mụrụ ụkpụrụ isi nke ụtụ isi: ego. Income tax e formalized na 1904. VAT, ego ụtụ isi, payroll tax, […]
You bụ onye Dutch ma ịchọrọ ịlụ di na mba ọzọ?
Onye Dutch Ọtụtụ ndị Dutch nwere ike nrọ banyere ya: ịlụ di na nwunye na ebe mara mma na mba ọzọ, ikekwe ọbụlagodi na onye ị hụrụ n'anya, ezumike ezumike kwa afọ na Gris ma ọ bụ Spain. Agbanyeghị, mgbe ịchọrọ - dị ka onye Dutch - chọọ ịlụ di na nwunye na mba ọzọ, ị ga-enwerịrị ọtụtụ usoro na chọrọ […]
Na July 1, 2017, na Netherlands iwu ọrụ gbanwere…
Na July 1, 2017, na Netherlands iwu ọrụ gbanwere. Na nke ahụ ọnọdụ maka ahụike, nchekwa na mgbochi. Ọnọdụ ọrụ bụ ihe dị mkpa na mmekọrịta ọrụ. Ndị were gị na ndị ọrụ nwere ike irite uru na nkwekọrịta doro anya. N'oge a na e nwere nnukwu di iche iche nke contracts […]
Nwere ike 30, 2017
Opekempe ụgwọ ọrụ na-agbanwe na Nederlands site na 1 July, 2017
Afọ nke onye ọrụ Na Netherlands ụgwọ opekempe kachasị dabere na afọ onye ọrụ. Iwu iwu na ụgwọ opekata mpe nwere ike ịdị iche kwa afọ. Dịka ọmụmaatụ, site na July 1, 2017 ụgwọ opekempe ugbu a ruru € 1.565,40 kwa ọnwa maka ndị ọrụ 22 na karịa. 2017-05-30
Nwere ike 22, 2017
Ezubere usoro iwu iji chọta ihe ngwọta nye nsogbu…
Nsogbu gbasara iwu A na-ezube usoro iwu iji chọọ ihe ngwọta maka nsogbu, mana ọ na-abụkarị ihe megidere ya. Dabere na nyocha sitere na ụlọ ọrụ nyocha Dutch HiiL, nsogbu iwu na-edozi obere ma pere mpe, dị ka usoro usoro ọdịnala (nke a na-akpọ ụdị asọmpi) kama na-akpata nkewa n'etiti […]
Nwere ike 19, 2017
N'oge a, hashtag abụghị naanị ewu ewu na Twitter na Instagram…
#getthanked N'oge a, hashtag abụghị naanị ewu ewu na Twitter na Instagram: hashtag na-ejiwanye mbido akara ụghalaahịa. Na 2016, ọnụ ọgụgụ nke ụghalaahịa na hashtag n'ihu ya mụbara site na 64% n'ụwa nile. Ezigbo ihe atụ nke a bụ akara ụghalaahịa T-mobile '#getthanked'. N'agbanyeghị nke ahụ, na-azọrọ a…
Akwụ ụgwọ maka iji ekwentị gị na mba ọzọ na-ebelata ngwa ngwa
N'oge a, ọ dịla ọtụtụ ihe na-adịkarịghị ịbịa n'ụlọ ụgwọ ekwentị ekwentị (n'amaghị ama) nke narị narị euro ole na ole mgbe afọ ahụ gachara, njem kwesịrị ekwesị n'ime Europe. Na-akwụ ụgwọ nke na-eji ekwentị mkpanaaka ná mba ọzọ na-ebelata ihe karịrị 90% tụnyere gara aga 5 ka […]
Ọ bụrụ na ọ bụ Dutch Minister…
Ọ bụrụ na ọ bụ Dutch Minister Asscher of Social Affairs and Welfare, onye ọ bụla nke na-akwụ ụgwọ ego kacha nta nke iwu ga-enweta otu ego a kapịrị ọnụ kwa elekere n'ọdịnihu. Ugbu a, Dutch kacha nta hour obula ụgwọ nwere ike ka na-adabere na ọnụ ọgụgụ nke awa ọrụ na ngalaba […]
You nwetụla ụbọchị ịgba akwụkwọ ezumike gị n'ịntanetị? Mgbe ahụ ohere dị elu na ị nwere…
You nwetụla ụbọchị ịgba akwụkwọ ezumike gị n'ịntanetị? Mgbe ahụ enwere ohere dị elu nke na ị zutere onyinye nke na-abịarute karịa ihe na-adọrọ adọrọ karịa ka ha mechara bụrụ, yana ọtụtụ nkụda mmụọ n'ihi ya. A screening nke European Commission na EU n'ji nchedo ndị ọchịchị nwere ọbụna […]
Na ụgwọ Dutch ọhụrụ etinyela na ịntanetị maka ịgba izu taa…
Billgwọ Dutch N'ime ụgwọ Dutch ọhụrụ nke etinyebere na ịntanetị maka ịgba izu taa, onye ozi Dutch Dutch Blok (Nchedo na Ikpe Ziri Ezi) egosipụtala ọchịchọ iji kwụsị aha amaghị aha ndị nwere ebu mbak. N'oge na-adịghị anya, ọ ga-ekwe omume ịmata ndị nwe akụ a na-adabere na […]
N'oge a, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume iche n'echiche ụwa na-enweghị drones…
Drones N'oge a, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume iche n'echiche ụwa na-enweghị drones. N'ihi mmepe a, Netherlands nwere ike nweelarị ihe osise dị egwu nke ọdọ mmiri ahụ 'Tropicana' mebiri emebi ma kpebie ntuli aka kacha mma iji nweta fim kacha mma. Dị ka drones adịghị […]
Akwụkwọ Ochie →